Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Maxaa Ka Dhaca Vegas Waa In Maskaxda La Dhigo
Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Qariyey ilaa Vegas
Koonfurta Nevada Health District waxay kugula talineysaa qof walba inuu mar kale xirto waji marka uu joogo gudaha iyo meelaha dadku ku badan yahay haddii la talaalay iyo inkale iyo inay tijaabiyeen taban iyo inkale.
Tirada kiisaska COVID-19 waxay kusii kordhayaan magaalada Las Vegas, Nevada, sida ay tahay kiisaska meelo badan oo dalka iyo adduunka ah.
Tani maahan shuruud rasmi ah, maadaama oo kaliya gobolka iyo magaalooyinku ay amri karaan taas.
Talada maaskaro ayaa timid ka dib markii saraakiisha caafimaadka ay soo sheegeen shalay 938 kiisas cusub oo gobolka oo dhan ah - kii ugu weynaa ee hal maalin ku booda tan iyo bishii Febraayo - iyo dhimashada cusub ee 15.
Taladan xoogan waxay saameyneysaa casinos, riwaayadaha, iyo naadiyada halkaasoo ganacsigu uu aad ugu soo kordhay tan iyo markii xayiraadihii laga qaaday isla markaana gobolku si buuxda ugu soo celiyey talaabooyinka xakamaynta aafada ee gobollada qiyaastii 7 toddobaad ka hor.
"Shaqsiyaadka la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin labadaba waa inay xirtaan waji-waji marka ay ku sugan yihiin goobaha dadku ku badan yahay - sida dukaamada cuntada, dukaamada waaweyn, munaasabadaha waaweyn iyo casinos-ka," ayuu Dr. Fermin Leguen, oo ah madaxa caafimaadka gobolkaas u sheegay suxufiyiinta. Xarumaha talaalka iyo tijaabooyinka ayaa ka sii socda goobaha ku teedsan gobolka, ayuu sii raaciyay Leguen.
Heerarka tallaalka ayaa istaagay toddobaadyadii la soo dhaafay Nevada, oo ah gobol ay ku tiirsan tahay libertarian halkaas oo saraakiisha caafimaadku ay ku soo warrameen Jimcihii in qiyaastii 55 boqolkiiba dadka deggan 12 sano iyo ka weyn ay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo ah Talaalka covid-19. Gobolka oo dhan, qiyaastii 46.3 boqolkiiba ayaa si buuxda loo tallaalay. Qaran ahaan, boqolkiiba 68 dadka qaangaarka ah ayaa helay ugu yaraan hal qiyaas oo tallaal ah, sida ay sheegtay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada.
Sarkaal ka tirsan ururka shaqaalaha oo matalaya 60,000 shaqaale ka tirsan shirkadda casino ee Nevada ayaa soo saaray bayaan uu ku xusay khataraha shaqaalaha ku soo food leh dadka aan tallaalnayn. Sarkaalka Midowga Cunnada ee Geoconda Argüello-Kline ayaa tilmaamay xogta CDC in kabadan 97 boqolkiiba dadka isbitaal ladhigay dhawaan COVID-19 ayaan helin talaal.